जिउँदो जान्छन्, लाश आउँछ | Bridge to Nepal and Nepali
यो लाशको बक्सा हो। यस्ता बक्सा खाडी मुलुकहरुबाट आउने प्रत्येक जहाजले बोकेर आउने गरेका छन् र आफन्तजन एयरपोर्ट पुगेर प्रक्रिया पूरा गर्छन र लाश बुझ्छन्। सरकार लाश आउने क्रमबारे कुनै चासो राख्दैन। किन लाश आइरहेका छन्? किन प्रत्येक दिन लाश आउँछन्? यसरी युवाको लाश आउनुको कारण के हो, यसको निदान के हुनसक्छ? सरकार पटक्कै वास्ता गर्दैन। मनलागेर युवा गए, तिनको लाश आयो त के गर्नु? यस्तै विचार राख्छ संवेदनहीन सरकार। युवाहरु यो सव देखिरहेका छन् र पनि वैदेशिक रोजगारीमा दिनहुँ दौडिरहेका छन्। के गर्नु, काम नभएपछि जानै पर्‍यो। युवाहरु विदेश पलायन हुने वाध्यतामा छन्।
यो वाध्यता कम गर्न सरकार तैयार छैन, राजनीतिक दलहरुसँग कुनै उपाय छैन। दैनिक हजारौं युवायुवती गइरहेका छन्। कामका लागि खाडी मुलुक जाने युवायुवतीको लाश यसै गरेर दिनहुँ आइरहेका देखिन्छन् एयरपोर्टको कार्गो सेक्सनमा। पैसा कमाउला, सुखसँग बसौंला, परिवारलाई सुख दिउँला भन्ने सपना बोकेर जाने युवाहरु दिनभर ४६ डिग्रीको चर्को घाममा काम गर्छन् र रात परेपछि एसीको चिसोमा सुत्छन्। दिनभरको थकाई मार्न ठाडो घाँटी पनि लगाउँछन्। चिसो र तातोको संयोजन शरीरले धान्न नसकेपछि कतिपय युवाहरु ओछ्यानबाट उठ्दै उठ्दैनन्।
ज्यान हत्केलामा राखेर काम गर्न जाने युवाहरु कतिपय खाडीतिरै दुर्घटनामा पर्छन् र ज्यान गुमाउँछन्। माथिको बक्साभित्र यस्तै सपना बोकेर साउदी गएका युवाको लाशको हो। साउदीमा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सुनसरीको झुम्का स्थित बक्लौरी गाविसका केशव चौधरीको मृत शरीर लिएर आउँदै गरेका आफन्तजन मनभरि पीडा बोकर उनको लाशलाई कार्गोबाट छुटाउँदैछन्। चौधरी २ वर्ष अघि स्काभेटर ड्राइभिङका लागि गएका थिए। भनिन्छ, उनलाई केही समय अर्कै काममा लगाइयो र पछि स्काभेटर चलाउन थाले। यसरी लाश ल्याउन नपाएका मलेसिया पुगेर मार्च २९ गते मृत्यु भएका हरैचा–५, मोरङ सेतुमारीका गोविन्द विष्टको शव बिहीवार आफ्नै सहोदर भाईले उतै दाहसंस्कार गरे।
कति युवती उतै मरेका छन्, कति मानसिक सन्तुलन गुमाएर बहुलाई बनेर एयरपोर्टमा उत्रिने गरेका छन्। कतिपय युवाहरु रुँदै आउँछन्। कतिपय उतैका जेलतिर, उतैका सास्ती खाएर मृत्यु कुरिरहेका छन्। कतिपय युवाले हण्डर र ठक्करमात्र खाइरहेका छन्। हो, केहीले राम्रो काम पाएका छन्, राम्रो कमाएका छन्। तर यो युवाशक्तिलाई नेपालमा खपत गर्ने, आफ्नै मुलुकको निर्माणमा लगाउने, मुलुकको सुरक्षामा प्रयोग गर्ने तरकिव राजनीतिक नेताहरुमा देखिन्न। तैपनि उनीहरु देशभक्तिको भाषण गरेर थाक्दैनन्। कठै हाम्रा नेता?
अर्को » थसेसका केन्द्रिय अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टचन स्वदेश प्रस्थान »
पहिलाको » पीआर काण्डले अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रीवीच मारामार »